फ्रेन्च रूलेट | रूले जुवा अनलाइन | पाउन्डस्लोट्स अनलाइन क्यासिनो
क्लासी र कूल, फ्रेन्च रूले रूलेट जुवा अनुप्रयोगहरूमा उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ खेलहरू मध्ये एक हो
१ of को पृष्ठभूमिमा सेट गर्नुहोस्th शताब्दी फ्रान्स, खेल फ्रान्सेसी रूले को लोकप्रिय क्यासिनो सुविधा को एक श्रद्धांजलि हो। माईक्रोगामि programमा प्रोग्रामरहरू र पाउण्ड स्लटमा उत्पादकहरूले ध्यानपूर्वक खेलको डिजाइन गरेका छन् जुन यसको प्रयोगकर्ता-मैत्री ईन्टरफेस, उपलब्धताका लागि मनाइन्छ रूलेट जुवा अनुप्रयोगहरू, सजिलो नेभिगेसन विकल्प र कुशल गेमप्ले। हामीसँग तपाईले खोज्नु भएको सबै चीजहरू छन्। आज हामीलाई सामेल हुनुहोस्!
हाम्रो रूले जुवा एप्समा फ्रेन्च रूलेको शर्त विवरण - अब लगईन गर्नुहोस्!
खेल रौलेट जुवा अनुप्रयोगहरूमा उपलब्ध खेल शर्त विकल्प को एक विस्तृत श्रृंखला को प्रस्ताव गर्दछ। यी बेट्स £ १ बाट सुरु हुन्छ र £ 80 सम्म उपलब्ध छन्। खेल द्वारा प्रस्ताव गरिएको विभिन्न शर्तहरू अधिकांश रूलेट जुवा अनुप्रयोगहरू विपरीत छन्।
बाहिरी दांवले रातो, कालो, सम वा विषम र यसमाa80 को एक खेल समावेश गर्दछ।
इनसाइड बेट्सले तपाईंलाई रूलेटको मानक रूपरेखामा बस्न लगाउँदछ र यसरी संख्या ० र between 36 बीचमा हुनुपर्दछ।
स्ट्रीट बेट ती हुन् जहाँ बाजी प a्क्तिमा तीनवटा मध्ये कुनै पनि संख्यामा राखिन्छ।
स्तम्भ बेट ती हुन् जुन संख्याको सम्पूर्ण स्तम्भलाई कभर गर्दछ र स्तम्भको तल राखिन्छ। यस शर्त का विजेताहरु २ देखि १ संग भुक्तानी हुनेछ।
रेखा दांवलाई छ नम्बर नम्बर बेट्स पनि भनिन्छ किनकि उनीहरूले कुल numbers नम्बरहरू समेट्छन् जुन तालिकामा छेउछाउका प of्क्तिहरूमा दुईमा देखा पर्नेछ।
यी धेरै शर्त विकल्पहरूको उपलब्धताले खेललाई थप पेचिलो बनाउँदछ।
सुरक्षित गेमिंग प्रक्रिया धेरै रौलेट जुवा अनुप्रयोगहरूको विपरीत:
पाउण्ड स्लट एक प्रतिष्ठित अनलाइन क्यासिनो हो र तीनिहरू भुक्तान गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता समावेश भएको र नेभिगेट गर्न सजिलो छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ। तिनीहरू पनि बेलायत जुवा आयोग द्वारा इजाजतपत्र र विनियोजित छन् र यसैले विश्वासयोग्य छन्। त्यसकारण, पाउन्ड स्लटहरूमा फ्रेन्च रूले खेल्दा खेलाडीहरू उनीहरूको लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यो पक्कै ठूलो मजा सेवा गर्नेछ। पाउन्ड स्लटमा अब यो प्रयास गर्नुहोस्.
चाखलाग्दो दृश्यहरू र फ्रेन्च रूलेटको ध्वनि, वास्तविक पैसाको लागि एक जूवा अनुप्रयोग
माइक्रोमिंगको अर्को शानदार उत्पादन, फ्रेन्च रौलेट रोचक अडियो र भिजुअल प्रभावको साथ राम्रोसँग भरिएको छ। खेल सम्बन्धित फ्रान्सेली क्यासिनोमा सम्बन्धित देखिन्छ कि सम्बन्धित सम्बन्धित स्थानहरू र ध्वनिको साथ राम्रोसँग भण्डार गरिएको छ। यसको जीवन जस्तो ग्राफिक्स, रमाईलो ध्वनि र गाईड खेल को प्रारूप को लागी स्पष्टता।
यस खेलको अनुप्रयोगलाई सामान्य परिचय वास्तविक पैसा जित्नु:
एकले एक अटोप्ले पनि छनौट गर्न सक्छ जुन तपाईंको खेलको लागि ठूलो सहायताको रूपमा काम गर्न सक्दछ। खेलको मुख्य उद्देश्य नम्बर वा प्रस्तावको विभिन्न श्रृंखलाको सजावटमा बाजी छनौट गर्नु हो।
अनलाइन उपलब्ध रौलेट जुवा अनुप्रयोगहरू वा वास्तविक पैसा जुवा अनुप्रयोगहरूको विभिन्न प्रकारका बीच, फ्रान्सेसी रूलेट उनीहरूमा सबैभन्दा प्रशंसनीय हुनको लागि जारी छ। पौंड स्लटहरू कौशलताको साथ अवधारणालाई मूल खेलको भिडियो रेन्डिसनमा क्युरेट गरिएको छ। यो संस्करणले यसको प्रेमीहरूलाई एक बटनको क्लिकमा पैसा बनाउन र उनीहरूको सुविधाको लागि सूट गर्दछ।
फ्रान्सेसी रूलेट संग ठूलो जीत को लागी एक भन्दा ठूलो दांव संग खेल भन्दा बरु अधिक खेल्न सुझाव दिइन्छ। अधिक तपाईं अधिक प्ले गर्नुहोस् यस जुवा अनुप्रयोगको साथ ठूलो रकम पैसा कमाउने तपाईंको अवसरहरू छन् निःशुल्क पैसा संग। खेल विशेष गरी क्यासिनो उत्साहीहरूको लागि मनपर्दछ जुन उनीहरूको मनपर्ने खेलको साथ केहि थप पैसा कमाउन चाहन्छन्।
रूले जुवा अनुप्रयोगहरू - तपाईले जितेको जे राख्नुहोस् पाउन्ड स्लटहरू